Global Voices teny Malagasy » Vovonana 2019 ho an’ny Gazetin’Olontsotran’ny Global Voices Azia-Pasifika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Avrily 2019 5:10 GMT 1	 · Mpanoratra I-Fan Lin Nandika avylavitra
Sokajy: Mediam-bahoaka, Blaogim-Piarahamonina GV, vovonana
Ry mpikambana malala ato amin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices,
Ny 30 May hatramin'ny 2 Jona no hatao ao Taipei, Taiwan ny Global Voices Asia Pacific Citizen Media Summit 2019 (Vovonana 2019 ho an'ny Gazetin'Olontsotran'ny Global Voices Azia-Pasifika). Natao hanomezana sehatra hitondrana miaraka ireo mpanao gazety voakasik'izany, ireo mpikatroka dizitaly, ireo mpikaroka sy ireo fikambanana rehetra mpiaramiasa amin-dry zareo izy io mba hizaràny ny zavatra niainany, ho fantatry ny maro ary hanorenana fiarahamiasa vaovao.
Hisy mandritra ilay vovonana ny roa andro ho fihaonana anatiny natokana ho an'ireo fikambanana mpampahalala vaovao, ny atrikasa iray mandritra ny iray andro, ary andro iray hahafahan'ny daholobe mifanakalo hevitra. Afaka hitanao ery ambany amin'ity lahatsoratra ity ny fandaharampotoana amin'ilay Vovonana, ny andron'ny 1 sy 2 Jona.
Ho hita mandritra ny atrikasa hatao ny 1 Jona ny resaka fiofanana momba ny fiarovana an-tserasera sy ireo fifanakalozankevitra hafantoka amin'ny fanamby atao amin'ny fandisoana vaovao, ny fiarahamiasa isam-paritra ao amin'ny faritra Azia-Pasifika, ary ny fandaharampotoana momba ny fiarovana ny zo nomerika..
Ny fifanakalozankevitra azon'ny rehetra andraisana anjara, hatao ny 2 Jona, dia hiresahana momba ireo fanamby vaovao ara-teknika sy politika, fa indrindra indrindra momba ny fidiran'ny resaka zo sy fikatrohana anaty aterineto, ny fiarovana sy ny fiainana manokana raha resaka nomerika, ny fivakisana nomerika ary ireo fanambin'ny fampandrosoana.
Ny lohahevitra ho an'ny fifanakalozankevitra handraisan'ny daholobe anjara amin'ny maraina dia “Ny fitomboana sy ireo fanamby entin'ny jadona nomerika ao Azia-Pasifika”. Horesahana amin'ny fotoana amin'io maraina io ny fipongaran'ireo endrika isankarazany amin'ny jadona nomerika – miainga avy any amin'ny lasitra jadona Sinoa mankany amin'ny lasitra miandany amin'ny vahoaka ao Filipina sy India. Ny lohahevitra horesahana ny tolakandro kosa dia ” Ny setriny ataon'ny olontsotra amin'ny jadona nomerika”. Horesahana mandritra ny fihaonana ny tolakandro ireo fandraisana andraikitra ataon'ny olontsotra ho setrin'ny tontolo vaovaon'ny nomerika – miainga avy any amin'ny teknolojia misokatra sy ireo angondrakitra misokatra, mankany amin'ireo hetsika sosialy ety anaty serasera. Fandraisam-pitenenana maharitra ora iray ataonà olona roa, fanolorana mandritra ny ora iray ary ireo fanamarihana avy amin'olona efatra mpandray anjara, arahana fifanakalozankevitra misokatra mandritra ny 30 minitra, ireo no ho hita mandritra ny fotoam-pivoriana tsirairay.
Fikambanana mpampita vaovao sahanin'olontsotra ary tsy mikatsaka tombontsoa, manana mpikambana maherin'ny 800 ny Global Voices, izay misy olontsotra mpanao gazety, mpikaroka, mpikatroka momba ny zo nomerika ary mpandika lahatsoratra avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Amin'ny fomba virtoaly ety anaty aterineto no tena anatanterahan'ny Global Voices ny ankamaroan'ny asa ataony, saingy manana ny foibeny ao Pays-Bas izy.
Ilay vovonana ho avy, vatsian'ny “Orina ho an'ny Demaokrasia ao Taiwan sy ny Orina ho an'ny Teknolojia Misokatra, ary iarahana mampiantrano amin'ny Ivontoerana Chang Fo-Chuan ho Fandalinana ny Zon'Olombelona avy amin'ny Soochow University ao Taiwan, dia ezaka iray ho an'ilay fikambanana mba hananganany tambajotra matanjaka kokoa sy mifàka kokoa ao amin'ny faritra.
Tena antenainay fatratra tokoa raha afaka ny hanjohy anay ianao amin'io Vovonana 2019 ho an'ny Gazetin'Olontsotran'ny Global Voices Azia-Pasifika io. Noho ny maha-voafetra ny isan'ny olona ho an'ny atrikasa amin'ny 1 Jona, raha mahaliana ano ny handray anjara, iangaviana indrindra hifandray aminay.
Fanamarihana: Tsy ilay vovonana mahazatra fanaon'ny GV ity, fa vovonam-paritra iray. Etsy ambany ny torohay natao dikapetaka avy amin'ilay fanambaràna teo aloha nataon'i Georgia momba azy io:
‘Nipoitra ny hevitra momba ny hanaovana fihaonana, ny tarika avy ao Azia ihany no nanao ny fandaminana sy ny famatsiambola, notarihan'ny toniandahatsoratra ho an'i Azia Atsinanana, Oiwan sy I-Fan mpikambana ao anatin'ny vondrom-piarahamonina, niaraka tamin'ny fanohanana avy amin'ireo toniandahatsoratra ao Azia, Rezwan sy Mong.’
‘Tena voafetra be ny tetibola ho an'ity vovonam-paritra ity, araka izany ny resaka sidina sy ny fiantohana ny fivahinianana ho anà vondrona mpandray anjara voafantina avy ao amin'ny faritra Azia-Pasifika ihany no azonay noraisina an-tànana. Fa raha misy olona hafa liana ny hanatrika sy maniry ny hiantoka ny tenany, aza misalasala mifandray aminay.’
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/20/137590/